Eminye Imisebenzi Yezomthetho e-United States enama-Visa amasha e-H-2B
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-USA Izindaba Ezintsha » Eminye Imisebenzi Yezomthetho e-United States enama-Visa amasha e-H-2B
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba • Abantu • Izindawo zokuhlala • Ezokuvakasha • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Ukuthuthela e-United States of America kusanda kuba lula kulabo abafuna umsebenzi emahhotela, ezindaweni zokungcebeleka, nezindawo zokudlela. Umkhakha weHospitality okwamanje awukwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo owawuzinikeze ngaphambi kwalolu bhubhane. UHulumeni wase-US uyakwazi lokhu futhi uvula i-United States ukuthi imeme abasebenzi bakwamanye amazwe ukuba bagcwalise imisebenzi edingeka kakhulu.
Ukuhlala kwamahhotela emahhotela ase-US nasezindaweni zokungcebeleka kukhula kancane kancane kwezinye izimo, kodwa ngisho no-50% wendawo cishe akwenzeki ukusingathwa ngabasebenzi abaqashiwe.
Ezindaweni zokungcebeleka zase-US ezifana neHawaii noma iFlorida, abantu abaningi abebeqashwe embonini yezokuvakasha, ikakhulukazi imisebenzi ezosiza ukuhlanzwa kwamahhotela, ideski elingaphambili, izindawo zokudlela, bashintshele kweminye imisebenzi noma bashiye izindawo zokungcebeleka.
Ukuhlinzeka ngamasevisi emahhotela kuba ngaphezu kwenselele, akukwazi ukwenza amazinga aphezulu okuhlala.
Ngemuva kokuthi uMnyango Wezokuphepha Kwasekhaya kanye Nezabasebenzi wase-US umemezele izinhlelo zokwenza kutholakale amanye ama-visa ezisebenzi zesikhashana angama-20,000 H-2B onyaka wezimali ka-2022, uMongameli we-American Hotel & Lodging Association kanye ne-CEO u-Chip Rogers bakhiphe isitatimende esingezansi.
“Isimemezelo sanamuhla siyizindaba ezamukelekayo, njengoba imboni yezindawo zokuhlala kanye nabanye abaningi beqhubeka nokudonsa kanzima emakethe yezabasebenzi emashumini eminyaka. Ukugcwalisa imisebenzi evulekile kuyinto ehamba phambili embonini yamahhotela, futhi uhlelo lwe-visa lwe-H-2B lusiza amahhotela nezinye izimboni ezinebhizinisi eliqinile lesizini kanye nabasebenzi kudingeka benze lokho kanye. Nakuba amalungu ethu ehlala ebheka kuqala kubasebenzi base-US ukuthi bagcwalise imisebenzi ebalulekile ngezikhathi zonyaka ezihamba phambili, uhlelo lwe-H-2B lusebenza njengethuluzi elibalulekile nelidingekayo lawa mabhizinisi amancane ukuvala igebe lokuqashwa.”
The Inhlangano yase-American Hotel & Lodging (AHLA) iyona yodwa inhlangano kazwelonke emele zonke izingxenye zemboni yokulala yase-US. Indlunkulu yayo eWashington, DC, i-AHLA igxile ekukhulumeleni kwamasu, ukwesekwa kwezokuxhumana, nezinhlelo zokuthuthukisa abasebenzi ukuze kuqhutshekwe nemboni phambili. Ngemuva komqedazwe we-COVID-19, ukungenisa izihambi kwaba imboni yokuqala eyathinteka futhi izoba phakathi kweyokugcina ukululama.
Paul Anthony uche uthi:
Disemba 25, 2021 ku-16: 15
Ngingumthwebuli wevidiyo ngingawuthola kanjani umsebenzi e-United States
NgeSonto jeff elaigwu uthi:
Disemba 22, 2021 ku-14: 28
Nginguweta ochwepheshe ngingasifaka kanjani isicelo